“Atsangano ny Tanana! Fangalarana izao!”: Mitohy ny Hetsi-Panoherana ao Espaina · Global Voices teny Malagasy
“Atsangano ny Tanana! Fangalarana izao!”: Mitohy ny Hetsi-Panoherana ao Espaina	Voadika ny 05 Febroary 2013 11:49 GMT
Zarao: Nidina maro an-dalambe hampiseho ny fahatezerany indray ny Madrileños tamin'ny faran'ny herinandro teo noho ny fiheverana ny Praiminisitra Mariano Rajoy ho nanao kolikoly. Tamin'ny alakamisy teo ny gazety nasionaly El País no namoaka [es] sarin'ny kaontim-boky ahitana an-d Rajoy sy ny mpikambana hafa ao amin'ny antokom-bahoaka ho mandray vola tsy amin'ny ara-dalàna (#lospapelesdebarcenas [es]). Nizotra teo ivelan'ny Foiben'ny Antoko ny Hetsi-Panoherana nandritra ny faran'ny herinandro.
Nitaky ny fialan'i Rajoy, tamin'ny alatsinainy teo ny avy ao amin'ny Antoko Sosialista ao amin'ny fanoherana. Notazonin'i Rajoy fa “diso tanteraka” ny filazana ary tsipahiny ny hoe fandraisana ireo vola ireo. Tsipahiny ny antso hialany ary nambarany fa ny antokony no mety indrindra amin'ny firenena hamakivakiana ny fahasarotana ara-toe-karena mihatra amin'izao fotoana.
Indro ny raki-tsarin'ny faran'ny herinandro nopihan'ny mpanoratra.
Presidente DelincuenteNy filohanay ilay mpisoloky, sarin'i Anna Williams
Por un Jaguar, Yo “mato”Raha Jaguar iray, mety “hamono” aho – filazana an-kolaka ny minisitry ny fahasalamana Ana Mato, izay heverina ho ao anatin'ilay fanafintohinana.Saripikan'i Anna Wiliams
¡No falta dinero sobran ladrones!Tsy ny vola no tsy ampy fa ny mpangalatra no be loatra!saripikan'i Anna Williams
¡Chorizo!Mpangalatra!Sarin'i Anna Williams
¡Manos arriba esto es un atraco!Atsangano ny tanana! halatra ity!sarin'i Anna Williams.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraAnna Williams
Tantaran'ny Eoropa Andrefana farany 2 andro izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaDia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa
4 andro izayGresyMiray Hina Isan'Andro Ny Olona Mba Hanampy Ireo Mpitsoa-ponenana Ao Gresy
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, বাংলা, Nederlands, Magyar, Português, русский, 繁體中文, 简体中文, Deutsch, Türkçe, English